Sida loo bixiyo barta internetka ee bangiga caalamiga ah ee SWIFT?
Waa maxay lacag bixinta degdegga ah? Isticmaalka, xawaaraha iyo ammaanka isticmaalka
Bixinta SWIFT waa xawaalad caalami ah oo u dhaxaysa shakhsiyaadka bangiyada iyo hay'adaha sharciga iyada oo loo marayo shabakadda lacag-bixinta ee SWIFT.
Xubnaha shabakada hadda ayaa ah wax ka badan 10 kun shirkadaha dhaqaale ee dalalka 210. Tani waxay ku siinaysaa awood aad si dhaqso ah ugu dirto lacagaha caalamiga ah ee lacagaha kala duwan ee dalalka ugu horumarsan.
Sidee loo bedelaa nidaamka SWIFT-ga online-ka ah?
Bangiyada badankood waxay awood u leeyihiin in ay diraan wareejinta caalamiga ee SWIFT online oo laga soo galo xisaabtaada Bangiga adiga oo aan guriga ka tegin.
Si aad lacag ugu dirto waddan kale, waxaad ku gali kartaa koontadaada bangiga ("bangiga internetka", "macmiilka internetka") ee qaybta isgaadhsiinta caalamiga ah, ka dibna buuxinta macluumaadka loo baahan yahay ee ku saabsan qofka qaata, si fudud ayaad u awoodi kartaa inaad lacag dibadda u dirto kharashka qofka qaata.
Haddii ay dhacdo muuqaalka su'aalaha, waxaad wici kartaa Baankaaga oo aad ka heli kartaa talo khabiir oo faahfaahsan.
Sidee baan toos ugu diraa Bangiga?
Bangiga kasta ee wadankaaga ayaa kuu oggolaanaya inaad ku wareejiso SWIFT. Booqasho shakhsi ah oo bangiga ah oo u sheeg inaad rabtid inaad sameyso macaamil ganacsi oo aad Bangiga ka siiso macluumaadka ku saabsan qofka lacagta qaata si toos ah shaqaalaha Bankiga. Shaqaalaha Bankiga ayaa kuu sameyn doona oo dhameystiri doona dhammaantiis, nidaamka waxqabadka ma qaadan doono wax ka badan daqiiqadaha 15.
Maxay yihiin macluumaadka loo baahan yahay bixiyaha macaamilka?
Si lacag loogu wareejiyo dibedda macmiilku wuxuu u baahan yahay inuu ogaado faahfaahinta buuxda ee SWIFT shakhsi ahaan ama sharci ahaan, kaas oo wareejinta la diri doono.
- magaca Baanka ka-faa'iideystaha (tusaale ahaan BANGKOK BANK PUBLIC CO..LTD)
- Koodhka nidaamka SWIFT (tus BKKBTHBK )
- Lambarka xisaabta ee aqbalaha
- Magaca iyo magaca qoyska ee qofka qaata
SWIFT waxay ku habboon tahay dirista wareejinta xaaladaha soo socda:
- Howlaha lacagaha badan ee dibedda ah iyada oo la yareeyo qarashka Guddiga.
- Dukaamada interneetka ku iibiya dibadda.
- Bixinta adeegyada shirkadaha shisheeye.
- Bedelida lacago badan oo lacag ah shakhsiyaadka ujeedooyin kale.
Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in dhammaan hawlaha lagu qabto nidaamka SWIFT ay yihiin kuwo ammaan ah.
Dhammaan, oo ay ku jiraan maaliyadeed, mas'uuliyad ahaan, waxa nidaamku laftiisa qaataa. Isku-dubarida munaasabado macquul ah iyo kuwo jireed ma ogola isbeddel ku yimaada gaadiidka, marka laga reebo codsi gaar ah oo aan suurtogal ahayn in wax laga beddelo farriinta inta lagu gudajirayo isgaadhsiinta adoo adeegsanaya SWIFT.
Marka laga reebo macaamiisha iyo qofka qaata, qofna wax ma akhrin karo waxyaabaha ku jira.
Xawaaraha lagu dirayo wareejinta SWIFT dibadda?
Sida caadiga ah lacagta waxay u timaadaa qofka qaataha saacadaha 24 (maalmaha shaqada). Xilliga ugu sareeya ee geedi socodku waxay qaadan doonaan maalmaha 3-5 si ay ugu noqoto xisaabta ku jirta.
Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan lacag bixinta si aad u hesho amarkaaga boggeena, fadlan nala soo xiriir